Kudungeke umuzi kuganana “izihlobo” | Ilanga News
Home Izindaba Kudungeke umuzi kuganana “izihlobo”
Kudungeke umuzi kuganana “izihlobo”
Kufaniswe nechilo ukulotsholwa kwentombi enesibongo esifanayo nesendoda
KUFANE nokubasa izinkuni zedungamuzi ukufika kwabakhongi beyocela isihlobo esihle emndenini wakwaMbanjwa, eSgangeni, eBulwer, emuva kokutholakala kokuthi isibongo somyeni nengoduso ziyafana.
Lokhu kwenze uyise wengoduso, uMnu Mongameli Jackson Mbanjwa, wazihlangula kule ndaba, wathi akayingeni ngoba akafuni ukuthelwa ngechilo
Lolu daba selufana nefilimu ebukwa mahhala njengoba kuthiwa ngisho ematekisini, yisemicimbini nasendaweni nje kukhulunywa ngayo, abantu bababaza
ukuthi umndeni kaNkz Zethu Mbanjwa (30), ulamukele kanjani ilobolo likaMnu Hloh Mbanjwa (35) waseMzimkhulu kubantu abanesibongo esifanayo nesawo.
Uyise kaNkz Mbanjwa uvumile ngesikhathi ethintwa yiLANGA ukuthi indaba yokuqoma kwendodakazi yakhe imfake ehlazweni, wesaba nokuthi usengamelwa
nayinhliziyo noma yinini ngoba le nto isiholele ekubeni kuchitheke nomuzi wakhe.
“Indaba iqale ngemuva kokuba amanye amadodakazi ami engibikele ukuthi antshontshe umazisi kamlamu wawo ngoba ethi bekuthi uma ebuza isibongo sakhe, yena nendodakazi yami bangene ezintangeni.
“Angitshele ukuthi kuthe besaphumile (umyeni nengoduso)
ngemuva kokuba (uHloh) evakashe emzini wami okwa-H, eMlazi,
babheka isibongo sakhe kumazisi wakhe, bashaqeka,” kusho yena.
Uthi ngokwesaba, namadoda-kazi akhe aqale angayithi vu le ndaba, okuthe uma sekuvela
ukuthi abakubo kwesoka bafuna ukuyocela isihlobo esihle, wabe eseyibuza indaba yezibongo.
“Ngiphenduke umuntu omubi kwangathi nginomona. Ngigcine ngizwa ngandlebenye ukuthi kade kuyocelwa indodakazi yami koninalume kwaChonco, iyocelwa ngabantu bakwaMbanjwa.
“Ngithole ukuthi nenkosikazi yami beyilapho, ngabe sengibuza yona-ke ukuthi iweqa kanjani umyalelo wami, yaphika yalala ngomhlane yathi yona ibizwe
izidlulela,” kusho uMnu Mbanjwa.
Uthi ucasulwe wukuzwa nje ukuthi umkakhe nguyena obetatazela namathileyi anamasaladi, kuphakelwa abakhongi bakwa-Mbanjwa lapho naye eganele khona.
“Ngilubike enduneni lolu daba ngoba bengifuna kusheshe kucace ukuthi kangifuni lutho oluzongi-hlanganisa nale nkohlakalo
eyenzekayo,” kusho yena.
Uthi emuva kwalokho kufike kuyena osonhlalakahle namaphoyisa beyombikela ukuthi indodakazi yakhe seyikhethe ukuziphatha, kayisekho ngaphansi kwesandla sakhe njengoba nomthetho waseNingizimu Afrika umvumela umuntu oneminyaka yobudala ewu-18 kuya phezulu ukuba
“Ngigeze izandla njengoPilatu. Sengizwile nje nokuthi kuzobe kuyiswa umbondo kubo kamfana ngomhla ka-16 kwephezulu, kodwa kangihlanganise lutho nalokho abakwenzayo, nelobolo elikhishiwe kangilazi futhi kangilifuni.
“Ngephuke inhliziyo emaso-ntweni amabili edlule kudlula emhlabeni umkhwekazi wami, kodwa ngoba bese ngizwile
ukuthi kuzobe kukhona abakubo kamkhwenyana wendodakazi, ngangakwazi nokuya ngoba
ngingafuni ukubabona,” echaza.
Ngale kokudungeka komuzi wakhe, uthi ngisho indodakazi yakhe seyiphenduke
isilwane njengoba uma eke wazama ukukhuluma nayo, ivele imchaphe ngenhlamba, imthuke nangamaphutha akhe aphambilini.
ngingase ngikhulise ingane eyongithuka ngamaphutha ami ngelinye ilanga ngoba ngizama ukuyinqanda iya eweni.
“Indlela le nto eseyiwuxo-ve ngayo umndeni wami, umkami usemukile ngoba ehamba nale ndodakazi, mina ngesekwa yibona bonke abantwana bethu ngoba bayazi ukuthi ngilwela ukuba kwenzeke iqiniso,” kusho yena.
Induna yaseSgangeni, uMnu Selutho Zikode, ithe lolu daba iyalwazi, yathi yazama ngisho ukuxhumana nabakubo komyeni kodwa bangazihlupha ngokuyokhuluma nayo.
“Ngokwazi kwami lwaphela lolo daba njengoba uMnu Mbanjwa wathi indodakazi yakhe ithe ngeke ishade ngokwesintu, isizoshada ngokwesilungu futhi isiphethwe wuhulumeni,” esho.
Unina wengoduso, uqale waba manqika ukukhuluma ngalolu daba. Ugcine evumile ukuthi
lukhona, wathi angakusho nje wukuthi kabahlobene nhlobo
noMbanjwa olobola indodakazi yakhe njengoba engowaseHighflats, bona bengabaseBulwer.
Uthe esakhuluma kwangena indodakazi yakhe yathatha ucingo, yathi iyawazi amalungelo ayo,
kayifuni muntu ozobhala ngodaba lwayo ngaphandle kwemvume, kungenjalo izobopha umuntu.
“Uma ufuna udaba lwami woza kimina sikhulume ubuso nobuso ngoba vele noma ngubani olukhulumayo uzolwenza luvune yena,” kusho uNkz Mbanjwa. Ethintwa uHloh, uthe akakwazi ukukhuluma nentatheli ingamtshelile umtho-mbo wayo, wathi yena akakaze
alobole kwaMbanjwa, ulobole kwaChonco.
Kuthe uma ebuzwa ukuthi uyazi yini ukuthi abazali bengoduso yakhe bangabakwaMbanjwa, wathi akudokwe eligayelwe ILANGA lelo. nomfundo@ilanganews.co.za
Previous articleKunzima kolahlekelwe amadodana
Isidumo uKhuzani ejijimeza uNgizwe 2nd Dec 2019
Isilomo sikhuza ibuya kwiSibaya 2nd Dec 2019
Uhlokoloze iziqandu othe uZozibini mubi 2nd Dec 2019
Abalandeli bancengela uLebese kwiChiefs 2nd Dec 2019